Jorodhani 'inoramba' Israeri Ramon Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Jorodhani 'inoramba' Israeri Ramon Airport
nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Israel Breaking News • Jorodhani Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mukuru weJordani's Civil Aviation Regulatory Commission, Haitham Misto, akadaro neMuvhuro, kuti kuvhurwa kwendege nyowani yenyika yeIsrael pamuganhu wavakagovana, kunogona kutyisidzira nzvimbo yeumambo.
"Jorodhani inoramba kuumbwa kwenhandare yendege yeIsrael munzvimbo yayo," akadaro mukuru weJordanian, maererano nenhau dzenyika.
Misto akati nhandare yendege yakatyora "zvimiro zvepasi rose zvine chekuita nekuremekedza hutongi hwenzvimbo yemuchadenga nenharaunda dzedzimwe nyika".
Gurukota reIsrael, Binyamin Netanyahu, vakapinda musangano wekuvhura pakutanga kwezuva reRamon Airport, yaida kusimudzira kushanya munzvimbo dzechiJuda uye kushanda senzira yechimbichimbi kune airport yeBen-Gurion yeTel Aviv.
Pakutanga, chiteshi chitsva cheairport chinobata chete nendege dzemumba dzinoshandiswa nevatakuri veIsrael. Zuva harisati ratarwa rekutanga kwendege dzenyika dzakawanda.
Jordani yakatanga kutaura kuramba kwayo nhandare nyowani yeIsrael pakatanga kuvaka muna 2013.
Iyo airport inogara mhiri kwemuganhu kubva kuJordani King Hussein International Airport muRed Sea guta reAqaba.
Misto akati Jordan akazivisa International Civil Aviation Organisation nezve "kuramba kwehumambo".
Iye akati, humambo hwakadaidzira ICAO kuti "itore matanho akakosha kuona kuti Israeri inoenderana nemitemo yenyika".
Misto akati komiti iyi yanga ichitaurirana nehurumende yeIsrael, uye "akavazivisa kuti danho rekushandira nhandare harifanirwe kutorwa zvisirizvo kusvikira nyaya dzese dzagadziriswa".
Jorodhani "inochengetedza zvese zvingasarudzwa kuti ive nechokwadi chekudzivirirwa kwezvido zveumambo uye kuchengetedzwa", akawedzera.